आमालाई खुशी र सुखी बनाउने इच्छा बोकेर साउदी गएका छोराको २२ दिनमै मृ’त्युभएपछि आमाकाे यस्तो बेहाल … – PathivaraOnline
Home > प्रवास > आमालाई खुशी र सुखी बनाउने इच्छा बोकेर साउदी गएका छोराको २२ दिनमै मृ’त्युभएपछि आमाकाे यस्तो बेहाल …
आमालाई खुशी र सुखी बनाउने इच्छा बोकेर साउदी गएका छोराको २२ दिनमै मृ’त्युभएपछि आमाकाे यस्तो बेहाल …
admin January 20, 2020 January 20, 2020 प्रवास	0
काठमाडौं। गएको पुस १ गते कान्छो छोरा मोहन वैदेशिक रोजगारको लागि साउदी अरबतिर लागेका थिए भने उनका दाई कृष्णबहादुर जर्घा अर्को दिन पुस २ गते मलेसियातर्फ उडेका थिए। संयोग दुइ भार्ईको वैदेशिक यात्रा एक दिनको फरकमा भएको थियो। आफु सुखी र आमालाई खुसी बनाउने मनभरी सपना बोकेर साउदी गएका मोहनको सपना सपनामै सिमित हुन पुग्यो। उनले बुनेको सपनाको महल साउदी अरबको खाडीमा ढलेको छ।
आमाकाे खुशीकै लागि २२ वर्षीय मोहनको साउदी अरब पुगेको २२ दिनमै मृ’त्यु भएको हो। ड्युटी सकेर कोठामा फर्कदै गर्दा सवारी दु’र्घटनामा परेर उनको मृ’त्यु भएको दाजु कृष्णले बताए। साइकलमा आउदै गरेका उनलाई एउटा कारले ठ’क्कर दिएको थियो। साउदीको रियादमा गएको पुस २३ गते मृ’त्यु भएका मोहनको अहिलेसम्म श’व नेपालमा आउन सकिरहेको छैन्। ‘कान्छो छोरा मोहनले विदेश हिड्ने बेलामा भनेको थियो ।
‘म पैसा कमाएर आउछु र पहिले आमा तिमी बस्ने घर बनाउछु’ दुवै आँखाको गहभरी टिलपिल आँशु लिदै नरमतिले भनिन् गएको एक महिना नपुग्दै मृ’त्यु भएको खबरले म बाँचुलाजस्तो लागेको छैन्। एक्कासी भक्कानिएकी उनी राम्रोसँग बोल्न समेत सकिनन्। ‘घरमा आमा बे’हाल अवस्थामा हुनुहुन्छ’ उनले भने ‘भाइको श’व छिटो घरमा ल्याउन पाए हुन्थ्यो। आफुले चिनेको ठुला मान्छे कोही नभएकोले भाइको श’व नेपाल कहिले आउने हो ? भन्नेमा अन्योलता छाएको कृष्णले बताए।
उनी ३६ दिनको छुट्टी लिएर आ’कस्मिक घर आएका हुन्। भा’वविह्वल अवस्थामा रहेकी आमालाई सम्हाल्दानै उनको दिनहरु बितिरहेको छ। भाइको श’व झिकाउने प्रक्रियाबारे उनी अ’नविज्ञ छन्। भाइलाई पठाएको म्यानपावरले दिएको आश्वासनमा आफुहरुले पर्खि रहेको उनले बताए। मोहन काठमाडौँको सिनामंगलस्थित फजल इन्टरनेशनल प्रालिबाट साउदी अरबको रियाद पुगेका थिए।
श’व नेपाल ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेको आश्वासन प्रालिबाट पाएको कृष्णले बताए। यद्यपि १२ दिन पुग्दा समेत श’व आउने सुरसार नदेख्दा कृष्णको परिवारमा झनै निराशा थपिएको छ। उनले भाइको श’व जतिसक्दो छिटो नेपाल ल्याइलिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरे। श’व नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको प्रालिका अध्यक्ष लक्षिराम ढुंगानाले बताए।
श’व कहिलेसम्म नेपाल आउछ भन्नेमा उनी पनि अ’न्योलमा छन्। मोहनको मृ’त्युपश्चात परिवारले पाउने राहतको बारेपनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको स्थानीय बीरबहादुर रानाले बताए।
जोरपाटीमा घ’ट्यो ड’रलाग्दो घटना ! युवतीले प्रेम प्रस्ताब नमान्दा बिचराले संसारै त्यागे (हेर्नुस् भिडियो)
चेन्नईबाट नेपालका लागि हिड्यो जानकी रेल, नेपाल पुग्न १५ दिन लाग्ने
मलेसियामा नेपाल फर्किन तयारीमा रहेका रोशन आफुसङ्गै सुतेका नेपालीबाटै यसरी लुटिए…
युएईमा एक नेपाली अधिकारी सम्पर्क विहीन, १५ दिन पहिले आफू बिरामी भएको जानकारी आफ्नो परिवारलाई दिएपछि सम्पर्कबिहीन